Uhlalutyo lweSamsung yeWatch Watch esebenzayo, ngexabiso kunye neempawu | Iindaba zeGajethi
I-Samsung Galaxy Watch Active, sihlalutya iwotshi enexabiso eliphantsi le-Samsung
Kukho iinkampani eziqhubeka nokulwela Thatha intonga yobukumkani be-smartwatch kwi-Apple nge-Apple Watch yakho, Enye yazo yi-Samsung, kuba igqibe kwelokuba ingazikhangeli kwi-Wear OS (inguqulelo ye-Android yeewotshi ezifanelekileyo) kwaye ikhethe iqonga layo ngesiphumo esihle, ngoku lixesha lokuba ubone iindaba ezisandula ukwaziswa.
Kudala sivavanya i-Samsung Watch Watch Active entsha, ukubheja okungabizi kakhulu ukunxiba ngokufanelekileyo iwotshi esihlahleni sakho. Ke, hlala nathi kwaye ufumanise ukuba kutheni lewotshi ye-Samsung iye yaduma kangangokuba izinikele ekusiziseni ngamava amahle nakweliphi iqonga.
Njengokuba kuye kwenzeka ngamanye amaxesha, injongo yethu kukukunika olona hlalutyo lunezinto zinokwenzeka kwimveliso, kuba oku siza kujongana nawo onke amacandelo esiwaqwalaselayo ukumisela kwinqanaba loyilo, ukusebenza okanye naluphi na uhlobo lweenkcukacha Kuya kufuneka uyazi ukwenza umbono malunga nokuthengwa kwexesha elizayo. Nangona kunjalo, siyakumema ukuba ujonge ividiyo esiyenzileyo noogxa bethu @Androidsis, iwebhusayithi yeqela elikhethekileyo kwizixhobo ezinyusa i-Android njengenkqubo yokusebenza, fumanisa i-Samsung Galaxy Watch Active, enye "ngexabiso eliphantsi" kwi-Apple Watch ekhoyo ukuhlala. Ukuba awufuni ukucinga ngayo kwakhona, ungayithenga kule khonkco isuka kwi-euro ezingama-199 kuphela.
1 Uyilo kunye nezixhobo: Zihlaziyiwe kwaye zinobunzima
2 Imitya kunye ujongano lomsebenzisi
3 Iimpawu eziSebenzayo zeGlass
4 Amava omsebenzisi kunye nokuzimela
Uyilo kunye nezixhobo: Zihlaziyiwe kwaye zinobunzima
Kwinqanaba loyilo, i-Samsung iyaqhubeka nokubheja kakhulu ukucofa, ukubonakala kwewotshi esemgangathweni egcinwe okoko yaqala kwi-smartwatch yayo kwaye eyahlula ngokucacileyo kukhuphiswano. Sinesixhobo sealuminium esineGlasi yeGorilla ngaphambili enesakhiwo esingu-2.5D ukuyenza inyamezeleke yonke imihla. Sine-1,1-intshi sphere, ngakumbi sinemilimitha ezingama-28,1 ngokujikeleza. Kwicala lasekunene sinamaqhosha amabini kuphela aya kusivumela ukuba sinxibelelane ngokwasemzimbeni nenkqubo yokusebenza engaphaya kwescreen.
Ubungakanani: 39.5 x 39.5 x 10.5mm
Tamaño Ukucofa ubukhulu: 28.1 mm
Ubunzima: I-25 gram
Ngokukodwa sinazo ezinye Imilinganiselo ye-39.5 x 39.5 x 10.5mm ilandelwe bubunzima obupheleleyo be-25 yeigram, enyanisweni ndingatsho ukuba eyona nto imangalisayo kwimini nosuku yale Galaxy Watch Active ngokuchanekileyo kukukhanya kwayo. Uya kuba nakho ukuyifumana eSpain ngombala oluhlaza, omnyama, opinki kunye nesilivere, umbala wombala okhangayo kuluntu olujolise kuwo ngokucacileyo.
Imitya kunye ujongano lomsebenzisi
Ngokuqinisekileyo Isamsung ithe ndlelantle kwi-bezel ejikelezayo enabathandi abaninzi ababenayo kuhlelo lwangaphambiliNgoku ukunxibelelana neqonga asinakukhetha ngaphandle kokuchukumisa isikrini okanye ukuya kumaqhosha alo amabini kuphela. Ngamanye amaxesha kuyakhohlisa ngokujonga ubungakanani bayo kunye nobungakanani besikrini.
Imitya yenye yezona zinto zinomdla kuyo, le yeGlass Watch esebenzayo isebenzisa inkqubo yokumisa esemgangathweni neyonke, Ngamanye amagama, uya kuba nakho ukusebenzisa phantse naluphi na uhlobo lomtya, kwaye awuyi kuba nasibophelelo sokuya kwikhathalogu yohlobo, njengoko iApple isenza, umzekelo, okanye kungenjalo ikukhuthaza ukuba ubheje kwiziphene zokungathembeki okungathandabuzekiyo. Unokukhetha izitayile ezingapheliyo, kuya kuxhomekeka kukuthanda kwakho kwaye nabanikezeli babo banakho ukubonelela, Kwiphakeji sifumana umtya we-silicone wombala wewotshi, enobukhulu obubini kuzo zonke iintlobo zabantu kwaye ngokungathandabuzekiyo lolona hlobo lufanelekileyo kwezemidlalo.
Iimpawu eziSebenzayo zeGlass
Kwinqanaba lezinto zokwakha inyani kukuba le Samsung Galaxy Watch Active ayisweli nantoni na ngaphandle kwexabiso, kwinqanaba lokudibanisa esinalo I-Bluetooth 4.2 yamandla asezantsi (asazi ukuba kutheni bengakhange bakhethe uhlobo 5.0) kunye I-WiFi engama-802.11bgn kwibhendi eyi-2,4 GHz. Kwinqanaba leempawu ezifanelekileyo kufuneka sichaze ngendlela efanelekileyo kukuba siya kuba nakho ukuhlawula ngayo, kuba sinonxibelelwano lweNFC kwaye ke iya kuvumela nayiphi na inkqubo ekhoyo ngamaqonga anjengeSamsung Pay. Yenzelwe ikakhulu ezemidlalo, ngenxa yoko ayinakuphoswa I-GPS, i-accelerometer, i-barometer, i-gyroscope, umfundi wenqanaba lentliziyo kunye nesenzi sokukhanya.
Izixhobo eziqhuba zonke ezi zinto zithweswe isithsaba ngazo 700 MB RAM, Ikhatshwa yiprosesa esembini-engundoqo, kunye 4 GB ye ukugcinwa kwangaphakathi okuya kuhlala kwi-1,5 GB nje ukuba inkqubo yokusebenza ifakiwe, yanele umlo olungileyo wezicelo ngaphakathi kwevenkile I-OS yohlobo, Nangona kunjalo, siza kuphoswa yenye into yokugcina umxholo wedijithali njengomculo. Khumbula ukuba sinayo Iphaneli eyi-1,1-intshi ye-SuperAMOLED ebonelela ngesisombululo sama-pixels angama-360 x 360 kunye I-230 mAh ibhetri, amandla asemgangathweni ekunxibeni. Ngokwempikiswano esinayo Isatifikethi se-IP68 ngokuchasene namanzi nothuli, ukuxhasa ukuya kuthi ga kwi-5 ATM, ukuze uhlambe nayo kwaye uyigilise kancinane kumadama okudada.
Amava omsebenzisi kunye nokuzimela
Ubhejo lwe Le Galaxy Watch isebenza ngenkqubo yokutshaja ngaphandle kwamacingo enemigangatho yeQi Iya kukunika ithuba lokuthatha ithuba kwiimpawu ezininzi zezinye izixhobo ezinje ngokutshaja okungenazingcingo okunokubuyiselwa kwezinye iifowuni. Ukuzimela kuya kuxhomekeka ekusetyenzisweni kwethu kwemihla ngemihla, kodwa kuya kufuneka ucace ukuba usebenzisa iGPS kunye nokubeka esweni ukubetha kwentliziyo, Awuyi kuba nakho ukugqiba iintsuku zombini, ke kuya kufuneka uzibize ubusuku ngabunye. Amava ethu okuphuma nokubaleka ngebhayisikile kuyenze yacaca gca kuthi le nto, kuya kufuneka uyibize yonke imihla kwaye oku yeyona nto iphambili kuyo.
Ngokumalunga namava omsebenzisi, sifumene ukufundwa okuchanekileyo kwinqanaba lokuphakama kwentliziyo eziphantse zafana nakwezinye iimveliso ezinamaxabiso aphezulu ezinjengezo zivela eGarmin okanye Apple, I-Tizen OS ibonakalise ukuba ingaphezulu kwenkqubo yokusebenza, ikhoyo ngokomzekelo kwiithelevishini zeSamsung apho itshayele khona i-Android TV, kwaye ngoku yenze okufanayo ngeGoogle Wear OS.
Into endiyithandayo kakhulu ngayo Ibiyinkqubo yokutshaja enomgangatho oya kusivumela ukuba sihlawulise phantse kuyo nayiphi na imeko. Apho i-Samsung ibuye yalawula khona kuyilo, umlinganiso wezinto ezinobunzima kunye nomgangatho olungileyo wesikrini.
Apho leGlass Watch esebenzayo ibonakala incinci ngokucacileyo kuzimele, nangona ndinyanisile, kuthathelwa ingqalelo ixabiso layo kundibizile ukufumana ezinye iziphene, ukubeka kodwa ndifuna ukukhumbula oko ayinasithethi. Ungamfumana ukusuka kwi-199,99 kwiAmazon,Ungayifumana ukusuka kwi-199,99 kwiAmazon,iwotshi ekhuthazwe kakhulu inikwe ukusebenza kwayo kunye nexabiso.
Ukuphononongwa okuSebenzayo kweSamsung kweSamsung
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Samsung Galaxy Watch Active, sihlalutya iwotshi enexabiso eliphantsi le-Samsung
Ukwazi njani ukuba ilaptop ineBluetooth
I-Logitech yazisa ngemouse yayo engenazingcingo ye-G502 Lightspeed engenazingcingo